အသည်းကွဲဝေဒနာ ကုစားနည်း ၄ သွယ် | သိလိုရာမေး
သမီးရည်းစား ဆက်ဆံရေး အသည်းကွဲဝေဒနာ ကုစားနည်း ၄ သွယ်
အသည်းကွဲတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ သမီးရည်းစားချင်း ချစ်ကြိုက်ပြီးမှ ကွဲလို့ အသည်းကွဲကြသူတွေရှိသလို တစ်ဖက်သတ်ကြိတ်သဘောကျနေရသူက ချစ်သူရသွားလို့ တိတ်တိတ်လေး ကြိတ်ကြေကွဲပြီး အသည်းကွဲတဲ့သူတွေလဲ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။
ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့်ပဲ အသည်းကွဲကွဲ ရင်ထဲမှာ ဒဏ်ရာရတာကတော့ တူတူပါပဲ။ ရတဲ့ နှလုံးသားဒဏ်ရာ အတိမ်အနက်ပဲ ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဒဏ်ရာ တိမ်သည်ဖြစ်စေ၊ နက်သည်ဖြစ်စေ၊ ဒီဒဏ်ရာကို အချိန်မီ ကုစားပြီး ဘဝရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့ သိလိုရာမေးကနေ အသည်းကွဲဝေဒနာကုစားနည်း (၄) မျိုးကို ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။
(၁) အတင်းအဓမ္မမေ့ပစ်ဖို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဖိအားမပေးပါနဲ့…
လူတော်တော်များများက အသည်းကွဲပြီဆိုတာနဲ့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံ သုံးပြီး ခံစားရတာကို မေ့ပစ်ဖို့ ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။ ယောကျာ်းလေးတွေဆိုလဲ ရည်းစားနဲ့ကွဲလို့ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ဂိမ်းဆော့မယ်၊ အရက်သောက်မယ်၊ မိန်းကလေးတွေဆိုလဲ တငိုငို တရယ်ရယ်နဲ့ ကြေကွဲမယ်။ လူ့သဘောသဘာဝကိုက အတင်းအဓမ္မဖိအားပေးလေ… မလုပ်နိုင်လေ ဆိုတဲ့သဘောတရားရှိတဲ့အတွက် ကိုယ်ထိခိုက်တာသာ အဖက်တင်မယ်။ ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ပြောချင်တာက ကွဲနေတဲ့ အသည်းကို ကုစားဖို့ဆိုတာက အချိန်တွေ၊ စွမ်းအင်တွေနဲ့ အားစိုက်ထုတ်မှုတွေ လိုပါတဲ့အတွက် အရမ်းမလောပါနဲ့…
(၂) ခွင့်လွှတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ…
ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို အကြောင်းပြချက် မယ်မယ်ရရ မရှိဘဲ ဘလိုင်းကြီး လမ်းခွဲသွားလား? ဒါမှမဟုတ် ခြံခုန်သွားတာလား? စနိုက်ကြော် လုခံလိုက်ရတာလား? ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲ အသည်းကွဲပါစေ… ကိုယ့်အမှားကြောင့်မဟုတ်ပဲ တခြားသူအမှားကြောင့် Relationship တစ်ခု ပြတ်စဲခံလိုက်ရတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘက်က လိုက်ခံစားနေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုသာ ပြုပြင်လို့ရမယ်… တဖက်လူကို သွားပြီး ပြောင်းလဲအောင်လုပ်လို့မရတဲ့အတွက် တဖက်လူရဲ့အမှားကြောင့်ဆိုရင် မကောင်းတဲ့လူနဲ့ ဝေးသွားတာ အကောင်းပဲလို့ စိတ်ထဲမှတ်ပြီး ဒေါသထွက်မနေပါနဲ့။ မေ့ပစ်ပြီး မကောင်းတဲ့သူတွေကို ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါ..
(၃) အားမွေးပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် တဖန်ပြန်လည် တည်ဆောက်ပါ…
လူတစ်ယောက်ကို ချက်ချင်းမေ့ပစ်ဖို့ဆိုတာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ခက်ခဲနိုင်ပေမယ့်လဲ လူ့ဘဝက ခန့်မှန်းထားတာထက် ရှည်ပါတယ်။ အဲ့တော့ အချစ်ဆိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့ ဘဝကို တည်ဆောက်လို့မရတဲ့အတွက် ရှေ့လျှောက် ဖြတ်သန်းရတဲ့ ဘဝခရီးလမ်းမှာ အသည်းကွဲတာကို ရေးကြီးခွင်ကျယ်တစ်ခုလို လုပ်နေလို့တော့မရပါဘူး။ အသည်းကွဲလို့ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ခံစားပြီးရင် မေ့ပစ်ပြီး ကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်သင့်တာတွေကို လုပ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အချိန်ပေးပြီး ဂရုတစိုက် နေပါ… တချိန်ကျရင် ကိုယ်ခံစားရတဲ့ အသည်းကွဲဝေဒနာက ဟာသတစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
(၄) လူသစ်ကို ရှာဖွေပါ…
ဟုတ်ပါတယ်။ လောကကြီးမှာ ယောကျာ်း မိန်းမ တွေ ပေါပါတယ်။ ဒီတယောက်နဲ့ ပြတ်စဲသွားလို့ ဒီတစ်ယောက်မှမရရင် မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးက နည်းနည်းတော့ ဟာသမြောက်တဲ့အတွက် သင့်အတွက် ဒီလူထက် သာတဲ့တခြားလူတစ်ယောက်က လောကကြီးမှာ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ Crush နေခဲ့ရသူ ရည်းစားရသွားလား? နောက်တယောက် ပြောင်း Crush လိုက်ပါ! ခြံခုန် စနိုက်ကြော်ခံရလား? ဒီထက် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းတဲ့သူကို ပြောင်းစိတ်ဝင်စားကြည့်ပါ… အခွင့်အလမ်းကို အမိအရ ဖမ်းဆုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ သင့်အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။